Paul McCartney anobvuma kuti anokanganwa maBeatles rwiyo rwemazwi - Nhau
Kuru Style Macelebs Blog Varaidzo
Paul McCartney anobvuma kuti anokanganwa maBeatles rwiyo rwemazwi
Sir Paul McCartney vanobvuma kuti dzimwe nguva vanoda zvishoma 'rubatsiro' kana zvasvika pakurangarira mazwi kune dzimwe dzenziyo dzadzo dzinozivikanwa.
Hazvina kunyanya kukanganwa, ngano yemumhanzi inoti, zvakanyanya kuti pfungwa dzake dzinodzungaira ... kunyangwe pamberi penzvimbo yakazara nevateveri.
khloe kardashian akarasikirwa sei nemapaundi makumi maviri mumavhiki mana
mufananidzoSPACE / Shutterstock
'Ini ndichave ndichiita rwiyo, ngatiti' Eleanor Rigby 'kana chimwe chinhu, uye ini ndiri kuzviongorora,' akadaro pa Smartless podcast. 'Ndiri kutanga kufunga' Oo, chii chandichave nacho chekudya kwemanheru gare gare? Pamwe hauzove nesobho asi pamwe uchangoenda kukosi ... 'Uye ini ndoenda' MIRA! ' Nekuti ndiri kuimba 'Eleanor Rigby.' '
Nekuda kweizvi, Paul, 78, anoshandisa teleprompter pachikuva kuti asatsvedza.
Iye zvakare haasi chaizvo munyori wenhoroondo weBeatles.
ndiani ane brandi glanville akambodanana
'Ini ndiri chiyeuchidzo chakaipisisa chepasirose cheBeatles' nhoroondo, 'akadaro mukutaura kwazvino na Taylor Swift YeRoting Stone. 'Ini ndinongofunga,' Zvakanaka panozogara paine munhu anoziva. Saka, ndinongobvunza mumwe munhu! ''
Globe Mifananidzo / Mediapunch / Shutterstock
Icho chokwadi chekuti iye 'Paul McCartney' hachina kurasika paari futi. Ndichiri kutaura naTaylor, akati akaisa chikamu muimbi ane mukurumbira kubva kuLiverpool, England, kubva kumurume wekuLiverpool, England.
'Ndinoziva kuti ndine mukurumbira, asi handidi kufamba senge ndine mukurumbira. Ini ndinoda chidimbu icho chandaive nacho pandakakura ndichingoenda mubhazi nekungove, unoziva… 'akadaro. 'Asi ini ndinomuparadzanisa' iye 'kubva' kwandiri. ' Saka, ini, ini handifarire kutora mifananidzo kana vanhu vachiti, 'Ndingawana mufananidzo here?' nekuti munhu wese ane kamera munyika. Uye saka ndinoti 'ndine urombo, ini handiite mifananidzo.' '
chii chakaitika kuna olivia munn
Akaenderera achiti, 'Dzimwe nguva ndinonzwa sekunge ndinofanira kuti,' Tarisa, ndinofara kutaura newe. Gara pasi. Tinogona kutaura. ' Nekuti ndinozvida izvozvo. Nekuti ndichiri ini. Mineti ini yandaisa ruoko rwangu pauri, kana iwe ukaisa ruoko rwako pakandikomberedza, ndinonzwa kunge tsoko iri muSt Tropez. 'Huya utore mufananidzo wako netsoko.' Handifarire izvozvo. Zvinondiisa kure. '
Katherine Heigl naJosh Kelley vanopemberera makore gumi emuchato: Muone iye mutero wemutero
Ndiani musikana wekupedzisira waLuke Perry, Wendy Madison Bauer?
ben affleck uye j lo
wiz khalifa pane amber rose
jesse williams na aryn drake lee
chris martin uye gwyneth paltrow mifananidzo